Franchise inoramba ichitsigira vadzidzi mari | Franchiseek
Franchiseek»Franchise inoramba ichitsigira vadzidzi mari
Kune vakapedza kudzidza muna2020, zvakajairika mapato, mhemberero nemhemberero zvese zvakaiswa. Izvo zvakanyanya maererano nekusavimbika kwakakomberedza remangwana ravo uye kudzvanywa kwemari kumhuri kuburikidza nedenda.
Kwemakore mashanu apfuura, a kodzero theatre chikoro network yakange ichipa vadzidzi kuvadzidzi avo vari kuenderera mberi vachiita zvekuridza hunyanzvi kukoreji, kubatsira nezvimwe zvemutengo unozoita zvidzidzo zvavo. Ipo bhizinesi rega rega ranzwa nekumanikidzwa kwemari, Razarazaz Theatre Zvikoro zvaisimbira kuti vaizoenderera mberi nechavo Yekusimudzira Fund uye nekuenderera mberi nekupa rubatsiro kune vakapedza kudzidza muna2020.
"Mwaka uno wevadzidzi vakatorasikirwa zvakanyanya asi isu takatsunga kuti chimwe chezvinhu izvozvo chisazove mukana wekunyora pamberi pevatongi vemaindasitiri vane ruzivo kuti vapihwe hunyanzvi hwekubatsira mukubhadharwa kwedzidzo yavo. "Anodaro Denise Hutton-Gosney, MD uye Muvambi weRazamatamat. “Isu tinosimudzira dzidziso yeRamangwana Fund kuti titsigire vadzidzi kuzadzikisa zviroto zvavo zvekushanda muindastiri inoita zvemitambo. Tinoziva kuti mhuri zhinji dzakapinda munyatwa munguva dzeCOVID-19 saka tinofara chaizvo kukwanisa kubatsira zvishoma. ”
Kekutanga kwenguva yekutanga, kududzirwa kwakaitwa pamusoro peZoom, hunyanzvi hutsva uhwo vadzidzi vaifanira kudzidzisa. Vakakumbirwa kuti vaite rwiyo, kutamba uye dhiraivha mudhiza mune chero yemimhanzi mitambo yemitambo kana yekutengesa, iyo inoratidza ikharamu inopihwa naRazamatazaz.
Vatongi vegore rino vaive Shekinah McFarlane, parizvino ane nyeredzi mukati SIX iyo Musical saAnne of Cleves. Zvikwereti zvakapfuura zvinosanganisira, Shumba King, American Idiot, Tommy, Bvudzi, Parade uye RENT. Mutongi wechipiri aive Andrew Wright, kaviri Olivier Award asarudzwa, West End Choreograph uye Director uye rimwe remazita makuru muWest End zvikwata zvekugadzira.
Mwero wezvekupinda gore rino zvakare wakakwira zvakanyanya asi mushure mekufungisisa zvakanyanya, mubairo wekutanga we- zviuru mazana matatu emadhora wakapihwa Lewis Logie, makore gumi nematanhatu kubva kuna Razamataz Carlisle, uyo akapiwa nzvimbo zvakare paAndrew Wright yepamhepo choreography kosi.
Lewis akapihwa nzvimbo kuChamhembe Chikoro cheContemporary Dance uko achange achigadzirira zvakanaka hunyanzvi hwake hwese hwaakadzidza kuRazazazaz ku BA (Hons) Contemporary Dance kosi.
Vatongi vakaororwa nekutarisirwa kwake uye nekunyatso gadzira ongororo, iyo yakakosha kwazvo mune ino indasitiri yemakwikwi. Andrew anoti: “Lewis mutambi akasimba uye ndingafarire kuona yake yega. North ichava koreji yakanaka kwaari uye ane zvakawanda zvinogona uye akatipa ongororo chaiyo. " Shekinah anowedzera kuti: “Unogona kuona kuti aive akazvipira kuita saFosse uye akazvitora nguva kuti anzwisise zvaari kutamba. Tinogona kuona kuti akagadzirira kudzidza zvakawanda. ”
Vamhanyi vakakwira ndiNathan Stone, Razarazaz Medway, Nyasha Carroll, Razamataz Medway uye Mia Lewis, Razamataz Sutton Coldfield avo vakatambira madhora mazana mashanu neumwe kunanga kudzidziswa kwavo. Vangosarudzika vakasara vakagamuchira vhezheni yechipo- zana yeAmazon kuenda kumidziyo, zviwanikwa kana kupfeka kwekutamba. Aya aive: Paul Sukkaiyarat, Razamataz Weymouth, Olivia Lauter, Razamataz Paisley, Joe Downs, Razamataz Sheffield naHarry Lawrence, Razamataz Medway.
YeMangwana Fund inongori imwe yemikana yakawanda iyo Razamatazaz franchisees inogona kutora mukana. Kuva chikamu chedandemutande revanozviitira mhizha, vanosanganisa ruzivo rwavo uye kutaurirana nezve indasitiri pamwe nekubvumidzwa kubudirira kwebhizinesi, mubato unohwina kuzvikoro zvinobudirira zvemitambo. Kuburikidza nedenda, Razarazaz akashanda nevanoverengeka vane hunyanzvi uye vane ruzivo vatambi, kusanganisira Kerry Ellis, mutungamiri anotungamira pa Broadway uye West End.
"Ini ndinoda Razezazaz uye dai pakanga paine chinhu chakadai nguva ndichiri mudiki, ndingadai ndiri parutivi rwangu," anodaro Kerry. "Ndakanga ndine rombo rakanaka kuti ndikwanise kushanda nevamwe vevadzidzi vaikurudzira vechidiki uye kushingairira kwavo uye shuviro yavo yavaive nayo yaivhunza pfungwa. Kuve nedzidzo yekutsigira uye kubatsira vechidiki kuwana nzira yekuita mukana wakakosha uye wakakosha uye handikwanisi kumirira kuti ndione kuti ramangwana ravo rinovaunzira chii.
Network inokura ine zvikoro makumi mashanu zvichikwira nekudzika nyika uye vadzidzi, vashandi uye maGurukota vanogara vachitora chikamu muzvirongwa zvekuvandudza mari kuti vabatsire vakananga kuRamangwana Fund.
Kunyangwe kuburikidza nedenda repasi rese, mukurumbira weRazarazaz Theatre Zvikoro zvave zvichireva kuti vashanu mafashoni ekuuya vauya mubhodhi kunyangwe COVID-19 uye kusagadzikana kuri kwakakomberedza.
Kuti uwane zvimwe pamusoro peiyo franchise neRazarazaz, Click Here